हामी e० यूरोको लागि बुडापेस्ट जाँदैछौं - यो उत्तम प्रस्ताव आविष्कार गर्नुहोस् | यात्रा समाचार
हामी Bud० यूरोको लागि बुडापेस्ट जान्छौं
पाउनुहोस् ticket० यूरो को लागी हवाई टिकट यो धेरै जटिल छ। अधिक, जब यो गन्तव्यमा आउँदछ बुडापेस्ट। हंगेरीको राजधानी पर्यटकहरु द्वारा धेरै अनुरोध गरिएको स्थान मध्ये एक हो। केहि चीज जसले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्दैन किनभने यसको सुन्दरतामा कमेन्ट गरिएको छ।
त्यसैले अब तपाईले यसको केहि दिनहरू हिंड्न र यसलाई प्रस्ताव गरेको हरेक चीजमा आफूलाई डुबाउनको लागि केही दिन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ जुन थोरै होइन! हामी बुझ्छौं कि यी प्रकारका प्रस्तावहरू लामो समय सम्म रहँदैन, यदि e० यूरो को मूल्य फेड्स, तपाईं अझै अर्को महान विकल्प छ, एक फरक तपाईं शायद याद गर्नुहुनेछ। के तपाई यसलाई खोज्न चाहानुहुन्छ?
1 बुडापेस्ट 40० यूरो को लागि उडान को महान प्रस्ताव
2 बुडापेस्टमा बजेट होटल
3 दुई दिनमा बुडापेस्टमा के हेर्ने
3.1 बुडा महल
3.2 मथियास गिर्जाघर
3.3 माछावालाको गढ
3.4 चेन ब्रिज
3.5 बेसिलिका सैन एस्टेबान
3.6 नायक वर्ग
बुडापेस्ट 40० यूरो को लागि उडान को महान प्रस्ताव
हामीले एउटा प्रस्ताव फेला पार्यौं जुन हामी धेरै सोच्न सक्दैनौं। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी सधैं टिप्पणी गर्छौं जब हामी तपाईंलाई यस प्रकारको पोष्टको साथमा छोड्छौं, तर यो वास्तवमै सत्य हो। तिनीहरू e० यूरो, राउन्ड ट्रिप हुन्। हवाइ माड्रिड बिहान सबेरै छोड्छ र तपाईं पुग्नुहुनेछ हंगेरीको राजधानी १० बिहान केही उत्तम छ किनकि यसले तपाईंलाई राम्रो ब्रेकफास्ट गर्न र होटलमा तपाईंको ह्यान्डब्याग ड्रप गर्न समय दिन्छ।
त्यसोभए यस महान शहरको भ्रमण गर्न तपाईंसँग पूरा दिन नै छ। हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, यदि e० यूरो नोट हराउछ भने, तपाईंसंग opportunity 40 यूरोको रूपमा अर्को अवसर छ, जुन कि खराब पनि छैन। नयाँ विकल्पले तपाईंलाई अनुमति दिन्छaहाते झोला र त्यो हामीले हेर्‍यौं, यो पनि एक ठूलो मूल्य हो। तिमीलाई लाग्दैन? यदि तपाईं दुबै आरक्षण र अन्य बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग पृष्ठमा सबै कुरा छ eDreams.
बुडापेस्टमा बजेट होटल
नोभेम्बर to देखि ११ सम्म तपाईंको पहिल्यै योजना छ। तपाईंले आफ्नो दिमाग बनाउनु भएको छ र उडान बुक गर्नुभयो। निस्सन्देह केहि चीज जुन हामीलाई थाहा छ उत्तम विकल्प भएको छ। तर यदि तपाईंसँग उडान छ, अब तपाईंसँग आवास छ। किनकि हामीलाई थाहा छ, यात्रा गर्नु अघि यसलाई बाँधेर राख्नु पनि उत्तम हुन्छ। ठिक छ, हामीले तपाईंको लागि उत्तम विकल्प फेला पारेका छौं।
हामीसँग केही अपार्टमेन्टहरू छन् जुन केन्द्रको धेरै नजिक छ। शायद त्यहाँ अरू भन्दा अलि बढी आवाज हुन सक्छ, तर सत्य यो हो कि दुई रातको लागत १ 16 यूरो छ। यदि तपाईंले यसलाई जाँच गर्नुभयो भने, प्रतिक्रिया एकदम सकारात्मक छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई अरू केहि माग्न सक्दैनौं। 'कोविन पोइन्ट रूम' हो आराम गर्न तपाईंको ठाउँ शहर थाहा पाएपछि। त्यसैले हामीले हाम्रो ब्याट्री रिचार्ज गर्न र टुरिस्ट ट्रेलमा फर्कनको लागि हामीले कम मूल्य तिर्नुभयो। यदि तपाईं यो कम लागत विकल्पको लागि विकल्प छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ Hotels.com.
दुई दिनमा बुडापेस्टमा के हेर्ने
जब हामीसँग यात्राको लागि केहि दिन वा घण्टा हुन्छ, हामीले ती मध्ये धेरैलाई बनाउनु पर्छ। त्यसोभए, हामी ती सबै कुनाहरूमा केन्द्रित छौं जुन वास्तवमै आवश्यक छ।
बुडापेस्टको पश्चिमी भागमा हामी बुडा पाउँछौं। तपाईंसँग बसहरू छन् र त्यहाँ पुग्न फिनिकुलर पनि छ। यद्यपि तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यदि यो कम लागतको यात्रा हो भने, जस्तो कि हामी हेर्दैछौं, बसबाट यात्रा गर्नु उत्तम हुन्छ, किनकि दोस्रो अलि बढी महँगो छ। त्यहाँ हामीले हेर्नुपर्दछ बुडा महल, त्यहाँबाट यसले हामीलाई सम्पूर्ण शहरको प्रभावकारी दृश्यहरू छोड्नेछ। यो शाही दरबारको रूपमा चिनिन्छ र राजाहरूको घर रहन्छ।
महलमा स्टप पछि, हामी यस तिर जारी राख्नेछौं मथियास गिर्जाघर। यो नियो-गोथिक शैलीको साथ, बुडापेस्टको सबैभन्दा प्रसिद्ध चर्चहरू मध्ये एक हो। हाम्रो कम लागतको यात्रामा, खातामा लिनको लागि अर्को मुख्य बुँदाहरू।
यो एक दृष्टिकोण हो, जुन मा अवस्थित छ बुद्ध पहाडी। यहाँबाट तपाईले संसद र दृश्यले अनुमति दिएको सबै चीज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, धेरै व्यक्तिहरूले यो भ्रमण दिन समाप्त भएको बेला गरेको सल्लाह दिन्छन्। कुनै पनि भन्दा बढि किनभने तपाई एकदम उत्तम छविहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, ती हाइलाइटहरूको साथ जुन हामीलाई यस्तै मनपर्दछ।
हामी निश्चित छौं हामीले पहिले नै थाहा पाइसकेका छौं, यो एक पूल हो जुन ठूलो महत्त्व राख्छ। किनभने बुडा र कीटको पनि भाग एकजुट गर्दछ। उसको बारेमा यो भनिएको छ कि यो सब भन्दा पुरानो हो, यद्यपि यो सत्य हो कि दोस्रो विश्वयुद्धको बेला सबै पुलहरू ठक्कर खाए। त्यसोभए एक नयाँ उठ्यो, ठीक १०० बर्ष पछि।
बेसिलिका सैन एस्टेबान
यस ठाउँमा सब भन्दा ठूलो र बोक्छ हंगेरीको पहिलो राजाको नाम। यो स्थान को निर्माण गर्न को लागी आधा शताब्दी भन्दा बढी लाग्यो। तपाईं टावरहरूको पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ यो बिना यसो भन्छ कि तपाईं प्रभावकारी दृश्यहरू हुनेछ, जुन तपाईंले छुटाउनु हुँदैन। जे होस् यसको लागि, तपाइँले तिर्नु पर्छ।
एक वर्ग जहाँ तिनीहरू भेट्छन् हंगेरी को सबै संस्थापक नेताहरु को मूर्तिहरु। त्यसोभए यो ध्यानमा राख्नु आर्किटेक्चरल जटिल हो। तपाईं यसलाई बिहान जान सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईं शहर पार्क मार्फत यात्रा जारी राख्न सक्नुहुनेछ।
कुनै श doubt्का बिना, हामी केहि संग्रहालयहरू छुटाउँदैनौं, वा शपिंगमा जाँदा रमाइलो गर्नेछौं gastronomy क्षेत्र को। किनकि तपाईले आफैंलाई संगठित गर्नु भएको छ जति सक्दो देख्न र गर्न सक्षम हुनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » हामी Bud० यूरोको लागि बुडापेस्ट जान्छौं